I-Lenovo izakuveza i-Lenovo Z5 yayo ngoJuni 5 | Iindaba zeGajethi
Inkampani sele ithumele izimemo zomnyhadala olindelekileyo apho kuza kubakho imodeli elandelayo yenkampani, iLenovo Z5 entsha. Esi sixhobo siya kuba sesokuqala kwimarike ukubakho umyinge wesikrini we-95% kwaye ke ayizukudibanisa inotshi ye-iPhone X okanye iifreyimu.
Inawo onke amanani ukuba abe yenye yezixhobo zeenkwenkwezi zeli xesha lasehlotyeni, kodwa ngokucacileyo iinkcukacha zokugqibela kufuneka zibonwe kwaye onke amarhe amiselweyo malunga nesi sigxina agqityiwe. Inkampani yaseTshayina ikulungele ukuqhekeza intengiso ngale nto ILenovo Z5 entshaNgaba uza kuyifumana?
Nge-5 kaJuni yenziwa ngokusemthethweni
Sijikwe sasebenza kwiveki ezayo kwiActualidad Gadget, kwaye yinto elandelayo emva kosuku I-Apple yenza intetho ephambili yeWWDC apho kubonakala ngathi zincinci izixhobo zekhompyuter, inkampani yeLenovo iya kubonisa isixhobo ekulindeleke ukuba sigqithe kwiimodeli zeXiaomi Mi Mix kunye "nescreen sayo sonke" abasibonisileyo.
Ekuqaleni ekuphela kwento enokuma ngokumalunga noku yiVivo Apex, esinokuthi ngento encinci ukuyiphakamisa phakathi kwabasebenzisi ngaphandle koyilo olubonakalayo kunye neefreyimu ezimbalwa. Kule meko, kulindeleke ukuba le Lenovo intsha sisiphelo esiqwalaselweyo kwaye ukuba izinto zenziwe kakuhle, banokufumana izikhundla kwimarike egcwele iifowuni. Kuya kufuneka siyazi into abasibonisa yona kwaye sijonge ukuba ngaba esi sikrini siyothusa ngokwenene okanye sihlala kumzamo, kuba ngoku iyathembisa ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » I-Lenovo izakuveza i-Lenovo Z5 yayo entsha ngoJuni 5
UFortnite ulumkisa ngobuqhetseba basimahla be-V-Bucks kwiYouTube
Ezi ziindaba zeNetflix zikaJuni 2018